Vasilina Mitskevich - एक प्रतिभाशाली बेलारूसी astrologer
ज्योतिष - विज्ञान रहस्यमय। लामो समय को लागि यो कुरा धेरै सुनेका, तर केही मानिसहरू साँच्चै यो के प्रश्नबारे छन्, मान्छे र हरेक व्यक्ति कसरी मदत गर्न सक्छ जाँच्ने कुरा बुझ्न। साँच्चै यो विज्ञान जोडतोडले गर्ने व्यवसायी, छैन धेरै छ। कारण विभिन्न लागि: यो अन्य मा एक हात मा पनि विशिष्ट र मूर्त परिणाम र सम्भावित को गम्भीरता को स्पष्ट अभाव छ।
Vasilina Mitskevich - एक पेशेवर astrologer। साथै, उनले 2010 देखि सामाजिक विज्ञान को एक उम्मेदवार हो। जनवरी 2013 मा यो astrofond "आधार" Vasiliny Mitskevich, अब लाग्यौं छ जो सिर्जना गरेको छ।
एक प्रतिभाशाली astrologer Mickiewicz को कथा
Vasilina Mitskevich astrologer जन्म भएको थियो। निस्सन्देह, उपकरण र प्रविधी को धेरै सिक्न सकिन्छ, तर साँचो व्यवसायीक बाल्यकाल मा आफ्नो क्षमता देखाउन। पहिलो व्यक्ति अरूलाई देख्न र सुन्न छैन भन्ने साना कुराहरू ध्यान दिन्छिन्। सबै महत्त्वपूर्ण छ र यो अर्थमा बनाउँछ: मानिसहरूलाई आवाज, तिनीहरूले बोल्न जो संग स्वरको आरोह अवरोह, बोली शब्दहरू। यो जन्म र एक जीवनकालमा मान्छे हुन्छ भनेर सबै को मिति बीच ढाँचाको पहिल्याउन रोचक छ। बेलारुसी astrologer Vasilina Mitskevich यो र आफ्नो बाटो मा सुरु भयो। त्यो, रेकर्ड, विश्लेषण, स्वरूपको फेला हेर्नुभयो। यो एक किशोर infatuation, लगभग रमाइलो छोराछोरीको खेल थियो।
ज्योतिष संग Vasilina familiarity
त्यसपछि विवाह भयो, बच्चा जन्मिएको थियो। Vasilina Mitskevich नयाँ आविष्कारहरू समय रूपमा आफ्नो जीवनको यो अवधि वार्ता। सबै भन्दा ठूलो अध्ययन Sergeya Vronskogo पुस्तक थियो - एक प्रसिद्ध astrologer, मानसिक, छैन, असाधारण रहस्यमय र दुर्गम केहि रूपमा, समाज यो विज्ञान बनाएको छ जसले, तर यो यस्तो सरल को समाधान र एउटै मौलिक समयमा आफ्नो दैनिक जीवनमा मानिसहरूलाई मदत गर्न एक ठोस सिद्धान्त छ यस्तो पेशामा वा जीवन साथी को विकल्प रूपमा मुद्दाहरू।
एकदम अक्सर, मानिसहरूको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा आफूलाई निर्णय केहि छिन रहने impulses र सल्लाह जो मान्छे अरू कसैको अनुभव निम्न द्वारा "थाहा जीवन" को प्रभाव अन्तर्गत।
प्रेरणा को स्रोत Vasiliny Mitskevich
Sergey Vronsky ब्रह्माण्डको को दुनिया तारा, ग्रह, पुच्छ्रेतारा, र अन्य ब्रह्माण्डको को घटक यो विशाल परस्पर सिस्टम को भाग हो रूपमा मात्र हो जो मान्छे असर रूपमा भन्नुभयो र आफ्नो पुस्तकहरु देखाउनुभयो।
Vronsky काम अध्ययन गरेपछि, Vasilina Mitskevich एक जग पहिले नै परेर, प्रयोग सञ्चालन गर्न थाले। प्रयोग औसत व्यक्ति पर्याप्त गर्न अनौठो लाग्न सक्छ: को चिहान मा महिला Tombstones जानकारी अधिलेखन। तर तपाईं कसरी अरू जाँच गर्न सक्नुहुन्छ, मानव जीवन, ताराहरू, ग्रह को व्यवस्था मा आफ्नो निर्भरता, राशि संकेत मा प्रमुख मिति आधारभूत नियमहरू गणना? यसरी मात्र, भनेर थाह पाउँदा सुरुमा थियो र अन्त आउँदा। तर पनि देखिने पूर्णतया बारेमा प्रचलित शंकाहरू छैन भनेर गणना पुष्टि। सहकर्मी, साथीहरूले साथ अभाव जडानहरू। सूचना विज्ञान मुद्रण पर्याप्त थिएन। इन्टरनेट अवस्थित छैन। कसरी यो गणना त्रुटिहरू को अभाव सुनिश्चित गर्न सम्भव छ?
पहिलो अभ्यास र ज्योतिष Vasilina पहिलो कदम
ज्योतिष रूपमा विकास नै अर्को सुरूवात बिन्दु, Vasylyna Mickevich को ज्ञात कला मा कुशल व्यवसायी को स्वागत मा समाप्त भयो जब गरे। बैठक भन्दा पनि साईट astrologer जीवनमा महत्त्वपूर्ण थियो। एक प्रसिद्ध व्यक्ति लागि निजी स्वागत यस विषयमा पहिलो, तर अझै पनि प्रयोगात्मक कदम भएका गर्नुभयो एक सहयोगी संग एक चर्चा मा गरियो। फलस्वरूप, छलफलहरू तारा चार्ट मा केही मुख्य क्षण रूपरेखा, एक स्पष्ट परिभाषा र अर्थ पाउनु भएको छ। र, जाहिर छ, एक इच्छुक astrologer Vasilina Mitskevich यस मामला मा एक विशेषज्ञ छ र आफूलाई व्यक्त गर्न सक्षम छ भन्ने बुझे।
2003 मा, शास्त्रीय ज्योतिष को उच्च विद्यालय को उपाधि। हामी विकास गर्न मा सार्न थियो। ज्योतिष एक वास्तविक विज्ञान, एक शौक वा व्यक्तिहरूको आवेग रूपमा आफ्नो गतिविधिहरु रक्षा गर्न पनि छरिएका छन्। त्यो Sergey Alekseevich Vronsky ज्योतिष एसोसिएट, प्रयासमा दुवै विशेषज्ञहरु भनिन्छ र यो जटिल, रोचक र रहस्यमय विज्ञान थप अगाडि सार्न।
2010 मा Vasilina Mitskevich व्यावसायिक ज्योतिष लागि संगठन आए। त्यो "कारण" 2013 मा आयोजित परियोजना को नेता छ। यो परियोजना, को ज्योतिष संयोजन गर्ने लक्ष्य लिएको छ सेमिनार आयोजित, प्रशिक्षण कार्यक्रम सिर्जना गर्ने, स्रोत Fasebook मा एक ब्लग राख्छ। स्कूल कि अवैतनिक ज्योतिष धेरै उच्च स्तर तयार दुई पाठ्यक्रम छ।
एक Horoscope astrologer Vasiliny Mitskevich म कहाँ प्राप्त गर्न सक्छन्
सदस्य Vasiliny Mitskevich को "आधार" को स्कूल आधिकारिक वेबसाइटमा राखिएको। राजनीतिक पूर्वानुमान, यात्री, विभिन्न दिशामा सम्भावित प्रकोप: यहाँ तपाईँले विभिन्न मुद्दाहरू मा दैनिक पूर्वानुमान देख्न सक्छौं। नक्सामा Horoscope विशेष चिन्ह लगाइएको ठाउँ, मा climatic मापदण्डहरु र भूकम्पीय को एक निश्चित दिन हुन विशेष गरी खतरनाक हुने प्रदर्शित छन्। अर्को, सडक emergencies र प्रकोप मा। व्यक्तिगत प्रतीक मौसम अवस्था मान्छे को व्यवहार असर, यस्तो irritability रूपमा आक्रमण को आक्रमण, सक्छ जहाँ स्थानहरू संकेत गर्छ। मानव जोखिम को हदसम्म रंग द्वारा संकेत गर्नुभयो।
को Horoscope मा विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ वा विश्वास छैन। तर यो विज्ञान गम्भीर, गहिरो, लामो समय को लागि अध्ययन र रहस्य थिए र एक तार्किक व्याख्या दिन धेरै प्रश्नहरूको जवाफ दिन्छ छ। Vasilina Mitskevich - विकास र उपलब्ध ज्योतिष बनाउन गर्नेहरूलाई एक।
वर्तमान र विगतमा लियो नक्षत्र
कन्या: एक एकल महिला?
के पत्थर उपयुक्त लियो-महिला, सिफारिसहरू ज्योतिष छ
Waterpark, Borovichi: समीक्षा, मूल्यहरू विवरण
ओवनमा हड्डीमा पोर्क - उत्तम पाक कला व्यंजनहरू
प्लास्टिक Windows मा ढलान कसरी बनाउने र कुन सामाग्री चयन गर्न?
मनोमोटर आविष्कार: प्रकारहरू, लक्षणहरू, उपचार
ढोका "प्रोफाइल Dors" - प्रवेश र भित्री